Vaovao - Ahoana no anaovana Wire Galvanized Hot Dipped - Hot Dipped (GI) Wire?
Amin'ny fizotran'ny Galvanizing Hot Dipped, ny tariby vy tsy misy sarimihetsika tokana dia ampandalovina amin'ny fandroana zinc. Ny tariby dia ampandalovina amin'ny zinc metatra rehefa avy nandalo dingana fanadiovan-tsakafo 7-dingana henjana. Ny fizotran'ny fanadiovana dia manome antoka ny firaiketam-po sy ny fifamatorana tsara kokoa. Hamafana ny tariby avy eo ary miforona zinc.
Ny fantson-drano mafana dia manome fanoherana ny harafesina tsaratsara kokoa noho ny galvanisation electro satria matetika ny hatevin'ny zinc dia 5 ka hatramin'ny 10 heny kokoa. Ho an'ny fampiharana ivelany na caustic izay takiana amin'ny fanoherana ny harafesina dia tariby mafana no milomano mafana no safidy mazava.
Ny hatevin'ny sosona zinc voafafa mafana dia mety hahatratra mihoatra ny 50 microns, ny ambony indrindra dia mety hahatratra 100 microns.
Ny galvanizing mafana-dip dia fitsaboana simika, dia ny fiatra elektro-simika. Ny galvanizing mangatsiaka no adiresy ara-batana, borosy fotsiny ny sosona zinc, mora latsaka ny sosona zinc. Fananganana amin'ny fampiasana galvanizing mandroboka mafana.
Mandroboka mafana dia ny ingot miempo amin'ny hafanana ambony, fitaovana fanampiny maromaro apetraka amin'ny toerany, avy eo natsoboka ny firafitry ny vy vita amin'ny vy, ny singa vy amin'ny sosona firakotra zinc. Ny tombony azo avy amin'ny harafesin'ny galvanizing mafana amin'ny fahaizany, ny firaiketany ary ny hamafin'ny firakotra zinc dia tsara kokoa.
Tombontsoa amin'ny Hot Dip Galvanized Wire
• Ny halavan'ny androm-piainana lava kokoa raha oharina amin'ny electro galvanized
• Ny fizotrany dia mamorona sosona firaka vy-zinc amin'ny velaran-by sy fonosana zinc madio eo amin'ny ivelany. Ny firaka dia manome tanjaka avo kokoa sy fanoherana ny abrasion mahazatra.
• Ny hatevin'ny firakotra zinc dia mety hahatratra 10 heny noho ny firakotra elektrika
Ny fatiantoka ny Hot Dip Galvanized Wire
• lafo noho ny tariby nandrisika elektro
• Ny hatevin'ny Zinc dia mety tsy mifanaraka amin'ny vokatra